आजदेखि कर्णाली उत्सव – Sajha Bisaunee
आजदेखि कर्णाली उत्सव
। १९ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०५:०४ मा प्रकाशित
सुर्खेत : ‘कुडा कर्णालीका’ मुख्य नारासहित सुर्खेतमा आज (सोमवार)देखि कर्णाली उत्सव सुरु हुँदैछ । आयोजक ऋति फाउण्डेशनका अनुसार आज बिहान ११ बजे बुलबुले उद्यानमा नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उत्सवको उद्घाटन गर्नेछन् ।
दिउँसो २ बजेदेखि ३ बजेसम्म ‘खसका खासखुस’ नामक सत्र सञ्चालन हुनेछ । कर्णालीबासी लेखक माधव चौलागाईले सञ्चालन गर्ने सत्रमा खस भाषाको पहिलो शब्दकोष ‘खसिया आखर’का लेखक खसभाषी रमानन्द आचार्य, डा. बद्री चापागाई र डा. रमेश ढुङ्गेलले बहस गर्नेछन् । कर्णालीबाट उत्पत्ति भएको खस भाषाको विगत, वर्तमान र भविष्यका सन्दर्भमा उक्त सत्रमा बहस गरिनेछ । ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म ‘संस्कार र समानता’ शीर्षकमा हुने बहसमा सञ्जीव उपे्रती, उषा तितिक्षु र गीता कोइराला वक्ता रहेका छन् । जसको सञ्चालन टीका विष्टले गर्नेछिन् ।